I-Semalt ivula amaTwitter kwi-Tricks ukuze uzalise iBhizinisi
Kusuka kwiKrismesi kunye neNew Friday offeraways kwi-Facebook kunye ne-Twitter ukubandakanya abathandi bezobugcisa kwi-Tumblr kunye ne-Instagram, kukho iindlela kunye nobuchule obuhlukeneyo bokuphumelela kwi-intanethi njengomntu oshishino. Ukuba uye wasebenzisa i-Facebook kwaye ufuna ukuzama i-Twitter, apha siwabelane ngeengcebiso ezithile zokuthabatha.
Into yokuqala okufuneka uyenze kukuba ukwenza iphrofayili ekhangelekayo ye-Twitter uze ugcwalise i-bio yakho. Ukufumana abalandeli beendaba zoluntu akulula, ngoko kufuneka usebenze nzima. Kuthiwa kufuneka ucebise izinto ngokufanelekileyo xa usitsha ku-Twitter kwaye ungazi yonke into malunga nayo. Ekuqaleni, kuya kuthatha ixesha elithile ukubandakanya abantu abaninzi nangaphezulu.
uFrank Abagnale, uMphathi wePlayer Success Semalt , uthi ukusebenzisa i-Twitter kulunge ngakumbi kwaye kulula kunokusebenzisa i-Instagram ne-Facebook. Kufuneka ukhuthaze abantu ukuba bakulandele, kwaye oku kuya kwenziwa xa uceba izinto ngokufanelekileyo kwaye uzibandakanya abantu ngokubelana ngokubambisene nomgangatho kunye nezinto ezigqwesileyo.
Sebenza ne-Algorithm ye-Twitter
Uninzi lwabantu alukwazi ukubaluleka kwe-algorithm ye-Twitter kwaye awazi ukuba ukusebenza kunye nokwandisa inani labo labalandeli. Abadayisi beDivithali kunye nabaphathi beendaba zoovimba bezentlalo bayazi ukuba ukusebenza nge-algorithm ye-Twitter kubalulekile kwimveliso kunye nabanikazi bewebhusayithi..Kufuneka ujonge iso kwaye kufuneka uqhelane noluphi uhlobo lweentlobo kunye nokuhla okuqhubekayo.
Sebenzisa iiVideos ze-Twitter
Ukusebenzisa iividiyo ze-Twitter kunokunika abaninzi abalandeli, izabelo kunye nezinto abazithandayo ngaphandle kwexesha. Amajelo asekuhlaleni ukuthengiswa kwevidiyo yenye yeendlela ezilungileyo zokunyusa ishishini lakho, kwaye oku kuye kwagqitywa kwamanqaku amaninzi. Ngaphandle kwe-Twitter, unokukhetha i-Snapchat, i-YouTube, ne-Instagram amavidiyo ukwandisa inani lakho labalandeli. Ukujonga ngokubanzi kwiprojethi yakho yeendaba zoluntu kufuneka ibe yinto enomdla kwaye ithathe inxaxheba.
Tweet rhoqo rhoqo
Mangaphi ama-tweets owabelana ngawo ngosuku? Ewe, le ngcamango kukuba kufuneka usebenzise i-Twitter imihla ngemihla kwaye ugcine abalandeli bakho behlanganyela ngendlela enye okanye enye. Thumela iifayili nganye imizuzu elishumi iya kwenza ihlabathi likwazi ukuba uyi-intanethi kwaye ulungele ukuchukumisa abalandeli bakho. Oku kuza kukunyusa inani labalandeli, kwaye abasebenzisi bakho baya kufumana ngaphezulu kwii-tweets zakho.
Zama into eyahlukileyo kunye entsha
Kubalulekile ukuba uzame into eyahlukileyo, entsha kunye nokubandakanyeka kunokuba abanye besenza. Kukho iintsuku apho abantu basebenzise ukwabelana ngezinto ezifanayo ngokuphindaphindiweyo. Le mihla, abantu bakhangwa kwiiprofayili ezibandakanya iimifanekiso zeprofayili kunye nomxholo omangalisayo. Yingakho kufuneka uzame izinto ezahlukeneyo kwaye uzame umxholo omangalisayo ukufumana abaninzi abalandeli kwi-Twitter. Le nkqubo inokuzwakala iyinkimbinkimbi, kodwa yindlela kuphela yokuqinisekisa ukuba usaphila kwi-intanethi. Ngoko ukuba uzimisele ngokubonakala kwi-intanethi, kufuneka ubandakanye abantu abanee-tweets ezibalaseleyo kunye neziqendu. Ngoko, uluphi na uluvo lwakho? Ungakulibali ukwabelana ngeengcamango kwiibhokisi zengcaciso apha ngezantsi.